I-SPAM kanye neMboni Yemiyalezo Yombhalo | Martech Zone
NgeSonto, Agasti 7, 2011 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 U-Adam Encane
Amabhizinisi awuthathe kancane umthelela wokuthumela imiyalezo ngocingo. Ukuthumela imiyalezo, okunye okwaziwa nge-SMS (iDemo Message System), kufakwe emthunzini ngaphezu kwezinhlelo zokusebenza zewebhu ezithandwayo. Noma kunjalo, akuyona yonke ifoni eyi-smartphone futhi engasebenzisa izinhlelo zokusebenza. Yonke ifoni ephathekayo ivumela ukuthumela imiyalezo.
Njengoba amabhizinisi ebuyela kule ndlela emangalisayo, abaningi abazinaki izimvume ezidingekayo. Imboni yayijwayele ukudinga ukungena kabili ukuze itholwe, kodwa selokhu yaphosa lezo zidingo kokungena okukodwa. I-SPAM inyuke kakhulu futhi kuzoba nemiphumela. Abasebenzisi abaningi beselula bayakhokhiswa ngayo yonke imibhalo etholakele - bevula imboni ngamacala.
Lokhu umbiko iveza inkinga enkulu embonini yezokumaketha imiyalezo. Ngokukhuphuka kogaxekile lomlayezo wombhalo, ukusebenza kokumaketha ngalesi siteshi kuzokwehla kakhulu uma kungazange kuhlolwe. Njengoba kunabantu abangaphezu kwezingxenye ezimbili kwezintathu zabantu base-US abathola ugaxekile wombhalo wombhalo, sekuyisikhathi sokuthi amabhizinisi aqale ukubona ukuthi ugaxekile onomyalezo wombhalo unamakhasimende abo kanjani futhi akhethe abahlinzeki be-software abanjengoTatango abasungule inqubomgomo yokungabekezeleli nhlobo imiyalezo yogaxekile. UDerek Johnson, isikhulu esiphezulu seTatango
NgoJulayi 2011, umhlinzeki wokumaketha imiyalezo uTatango wahlola abathengi abangama-500 baseMelika ukuthola ulwazi ngesipiliyoni sabo ngogaxekile bomlayezo wombhalo. Imiphumela yocwaningo isetshenziselwe ukudala i-infographic elandelayo kumyalezo wombhalo ogaxekile.
Ama-68% wabaphenduli bocwaningo bathi bathole ugaxekile wombhalo wombhalo.
Abesifazane abangaphansi kweminyaka eyi-17 yibo okungenzeka ukuthi bathole ogaxekile bomlayezo wombhalo abane-86% yabaphendulile kwinhlolovo bethi ngithole umyalezo wombhalo ugaxekile.
Abesifazane abangama-55 + mancane amathuba okuthi bathole ugaxekile womlayezo wombhalo ngo-51% wabaphendulile kwinhlolovo bethi ngithole umyalezo wombhalo ugaxekile.
Abesilisa nabesifazane ngokulinganayo kungenzeka babe ngabamukeli bombhalo wogaxekile.
Ukukhangiswa Kwemiyalezo Yombhalo nguTatango.
Isincomo sethu ngaso sonke isikhathi ukusebenzisa indlela yokungena kabili. Lokho kudinga umsebenzisi ukuthi abhalise kuqala ngewebhusayithi noma ngomlayezo wombhalo, kulandelwe isiqinisekiso sokuthi ufisa ukubhalisa. Lapho sisetha le sevisi yamakhasimende ethu ku Iselula exhumanisayo, sicela nemininingwane ethile - njengekhodi ye-zip. Lokhu kusivumela ukuthi sithumele imilayezo ngokuhamba kwesikhathi ikhodi ye-ZIP, kwababhalisile. Lokhu kunciphisa inani eliphelele lokuthumela futhi kwenyuse amazinga okuphendula njengoba imilayezo ifanele ngokwendawo.